-Kaviri-mativi laminated foil kuputira Kutarisana |
Yakapetwa mativi laminated foil kuputira Kutarisana
Iyo laminated kuputira yakatarisana inowanzo shandiswa kudzora vapor dhiraivha ine yekupedzisira chinangwa chekudzivirira condensation. Insulation yakatarisana nezvinhu zvinoshandiswa kudzikisira mweya wemhepo pakati pemhepo yakatenderedza kunze kwekudzivirira uye nepamusoro penzira, zvichidzivirira kudzikisira kubva pakuumba pamusoro pembiru kana pamusoro pekudzivirira.
Yakapetwa-kaviri inoratidzira kuputira, ine yakanaka yekuvhara mhinduro, yakakwira mhute yekudzivirira simba uye kurira kwekudzivirira zvivakwa.
Inoshandiswa pakubatanidzazve kubatana kwakasiyana-siyana kwekusimbisa zvinhu, uye sekudziya kwekupisa uye mhute chipingaidzo chemakomba emhepo mune zvivakwa zvesimbi kana epakati mweya mamiriro ekugadzirisa. Inogona zvakare kushandiswa senzwi uye kupisa kuputira zvinhu kune epamusoro-simuka zvivakwa, dzimba dzemitambo uye konzati dzimba, nezvimwe.
Kune yegirazi mvere, dombo shinda, maminera emvere uye zvimwe zvinopisa zvekudzivirira zvinhu, kupisa-kuvhara chisimbiso uye vapor barriers layer, yekotoni, uye yekotoni liner pamhepo kupisa chisimbiso veneer, kusangana neHVAC duct, inotonhora uye inodziya mvura pombi Adiabatic uye vapor bamer zvinodiwa uye kuputira zvinodiwa pakuvaka simbi.
Kune mitsara yakasiyana yezviitiko zvakasiyana zvekushandisa.
Yakanaka yekuisa chisimbiso majoini / seams kurwisa hunyoro uye mhute pane foil jacketing kuputira. Inokodzera kumwe kumwe kuiswa chisimbiso kwechigarire, kubata, kupwanya kana kuvhara mashandiro anoda kudzivirirwa kunopihwa neyekutsigira foil.
7micAluminiumfoil / PE / 8 * 12 / 100cm2, Nhatu-nzira fiberglass mesh / 60gKraft / Pe / 7micAluminium foil
Kurema kwechiedza, matatu-nzira fiberglass mesh, maviri-mativi kuratidzira kuputira, ine yakanaka yekuvhara mhedzisiro, yakakwira mhute chipinga simba uye kurira kwekudzivirira zvivakwa.
7mic Aluminum angazvidzvisa / FR guruu / 12.5x12.5mm maviri-nzira Washington City Offices pajira riya / Natural Kraft: 60gsm / FR guruu / 7mic Aluminum angazvidzvisa
Kurema kwechiedza, maviri-nzira fiberglass mesh, maviri-mativi anotarisisa kuputira, ine yakanaka yekuvhara mhedzisiro, yakakwira mhute yekudzivirira simba uye kurira kwekudzivirira zvivakwa, pamwe nekumwe kudzora kwemurazvo.
Kana iwe uchida zvigadzirwa zvedu, ndapota fonera kambani yedu, isu panguva yakakodzera tinopa tepi mhinduro iwe, uye tinokubatsira iwe kugadzirisa dambudziko.
Tsvaga MEIYUAN ndeyekuwana iyo tepi mhinduro, taura nesu!
Pashure: Peil-Pe Yakarukwa Laminated foil kuputira
Zvadaro: imba kudivi laminated foil kuputira Kutarisana
Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi
Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana
Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora
Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi
Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana
imba kudivi laminated foil kuputira Kutarisana
Peil-Pe Yakarukwa Laminated foil kuputira
Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora, Tepi, Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana,